Reishi Chigadzirwa, Mushroom Bvisa, Mushroom Yakawedzera Capsule - Kutonga
Sravana Sameeralu Serial 4th Turkey Muswe
Yakagadzwa muna2003, Wuling bhizinesi rezvebhaibheri. Kutanga uye kuvandudzwa muChina, isu ikozvino tawedzera kuCanada uye tinopa akawanda emhando dzakasiyana dzehowa zvigadzirwa.
YEMAHARA kudyara purazi
Nzvimbo yedu yekudyara yakasikwa iri kumaodzanyemba kwetsoka kweWuyi Mountain, inovhara nharaunda ingangoita 800 mu. Wuyi Mountain ndeimwe yenzvimbo dzakakosha dzeChina, uko mhepo iri mukati iri nyowani uye isina kusvibiswa kwekugadzira uye inokodzera kwazvo kukura kwehowa hwekurapa.
R & D uye mhando kutonga
Panzvimbo yega yega mukugadzira isu tinotarisa chigadzirwa chedu kumatanho ezvinoshanda zvinoshanda zvigadzirwa kuti uve neakaenzana uye akakwirira potency base zvinhu kana akapedza chigadzirwa kubva kwatiri. Isu tiri ISO 22000 yakasimbiswa uye tinogona kupa SGS yekuyedza mishumo pazvinenge zvichidikanwa. Zvakare, hunhu hwedu hunobva pane yakasarudzika kusarudzwa uye kuomarara zviyero zvezvinhu zvakasvibirira zvatinoshandisa uye maitiro akanyanya mukurima.
isu tinotsigira oem
Kubva 2003 isu takura vatengi vedu pasi rose uye tinotakura nguva dzose kune anopfuura makumi mana nyika dzakasiyana pasi rese. Panyaya yekutakura isu tinoita zvese zvatinogona kutumira nenguva uye tine timu huru yekugadzirisa izvi. Tine boka revashandi vanopfuura makumi manomwe nevashanu muR & D, kutengesa uye kugadzira.
Mishonga Mushroom Powder
Pfuura makumi maviri emhando yepamusoro mhando howa mushoma.
Zvese zvinoshandiswa zvinobva ku100% organic yakasimbiswa howa michero muviri.
Beta-Glucan Kubva pa10% -98%.
Polysaccharides Kubva pa10% -98%.
Hapana masara emushonga wezvipembenene.
Lab bvunzo yakabvumidzwa Heavy Metal Standard.
Kwete kuzadza kana Dextrin.
Reishi polysaccharides kubvisa
Zvinoenderana neCompendium yeMateria Medica, ganoderma lucidum ine chimiro chakatsetseka, kuravira kunovava, asiri ...
Shumba yeMane Mane yakabviswa
Tsanangudzo Chigadzirwa Zita reShumba Mane Bvisa Immune-Boosters Nyika Yekutanga China ...
Cordyceps Yemauto Bvisa Poda
Cordyceps, inozivikanwa seCordyceps militaris, yakaoma fungus Cordyceps miltaris chisvetasimba pane t ...
Organic Ganoderma Spore Mafuta macapsule
Iyo inozivikanwawo seDanzhi, inovava uye isiri chepfu. Inobata iyo thoracic knot uye Qi. Iyo Ganoderma luc ...
Organic Ganoderma Spore Powder macaps
100% Organic Ganoderma Bvisa Makapu
Mishonga Mushroom Capsules
Anopfuura zana mashandiro ekushandisa nevatengi vanogutsikana.
GMP inosimbiswa inogadzira ine organic inogamuchirwa.
FDA, USDA / EU SANGANO, HACCP, ISO22000, KOSHER, HALAL Zvitupa.
Kudzora Kwemhando kubva pakutanga kusvika kumagumo.
Yakasarudzika zvigadzirwa kubva pafomula kusvika kubhodhoro.
Mushroom Zvokunwa & Tea
Zvinoshanda zvinwiwa zvinwiwa zvine mishonga howa yakawedzerwa.
Organic yakasimbiswa yakakurumbira ingredient upfu.
Kofi, tii, poda yemichero, turmeric powder, Macha powder, Probiotic, Protein Powder.
Vanopfuura zana mutengi vakaguta fomula uye kuravira.
Yakasarudzika kubva kunonaka kusvika kubhokisi rekunze.
Imwe yekumira sevhisi, Yakagadzirira kutengesa.
Kunyorera Chikafu Main Musika ● Canada ● America ● South America ● Australia ● Korea ● Japan ● Rus ...
Reishi howa ane Beta Glucans (polysaccharides), refu-cheni makabhohaidhiretsi ayo ari e ...
Mbishi zvigadzirwa: Iyo yakasanganiswa yeMalaysian premium Arabica pakarepo kapu poda ine yakanakisa flav ...
Organic Ganoderma goko-rakaputswa Spore Powder cap ...
Juncao kurima tekinoroji inovavarira kuchengetedza nharaunda kubva pakucheka danda kuti ikure howa.
Zvinonzwisisika kukura kubva kune huswa hwesango.
Yakakwirira yezvinyorwa zve polysaccharides uye triterpene muRed Reishi.
Kutanga purazi mupasi rose kukura Juncao Red Reishi.
zvatinoziva nezvemushonga howa?
Gmp & Amp; fda yakasimbiswa.
Yakagadzirwa 100% tsika yechako.
Mutsara wakanaka wekutora.
Isu tine vagadziri vehunyanzvi uye vekupakata vagadziri kuti vagadzirise yako chaiyo brand!
Kenza yekurwisa, howa hunorapa hunoshanda!
Muzviitiko zvakakwirira zvegomarara zvanhasi, zvinofanirwa kukurumidza kudzivirira uye kurwisa gomarara! Kutsvagisa kwekurapa kwakaratidza kuti kanokwana makumi matatu neshanu muzana yegomarara inowirirana nechikafu, saka kudya kwakakodzera kwakakosha mukudzivirira gomarara. howa hunonhuhwirira Mushroom ipfuma mune chikafu. Vakare ...
Musimboti weGanoderma lucidum
Kutaura nezve ganoderma, isu tinofanira kunge takazvinzwa Ganoderma lucidum, rimwe remishonga pfumbamwe, rave richishandiswa kweanopfuura makore mazana matanhatu nemazana masere muChina. Basa rayo senge "kusimbisa muviri", "kupinda munzvimbo shanu zang", "kudzikamisa mweya", "kudzikamisa c ...
Kuva-inobhadharwa pachena-inotipa mukana wakakura wekuenderera mberi kukupa iwe zvemhando yepamusoro zvemukati. Ndapota titsigirei!
Adaptogens arikutsvaira nyika yehutano, nekukurumidza achikwira seimwe yemaitiro matsva anovimbiswa kusimudzira hutano hwako. Inonziwo Ganoderma lucidum, reishi howa inowanzo shandiswa mumishonga yekuEastern uye yakashandiswa mu "mushonga wechivanhu ...
7 makuru mabhenefiti enguva refu inodyiwa ganoderma
Chii chinonzi Reishi Mushroom? Reishi howa ari pakati pemamwe howa hwekurapa ayo ave achishandiswa kwemazana emakore, kunyanya munyika dzeAsia, pakurapa hutachiona. Munguva pfupi yapfuura, ivo vakashandiswawo mukurapa kwezvirwere zvemapapu uye cance ...